ပေး​ထား​တဲ့ DL link ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​ယူ​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ပေး​ထား​တဲ့ DL link ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​ယူ​မ​လဲ
​အ​ရင်​က ​ဒါ​ကို ​မ​ရေး​တော့​ဘူး​လို့ ​ဆုံး​ဖြတ်​ထား​တာ​ပါ ​မေးလ်​တွေ​နဲ့ ​မေး​ကြ၊ box ​မှာ ​လာ​မေး​ကြ​နဲ့​မို့ ​ကျွန်​တော် ​ပို့စ်​တင်​ပြီး ​ဖြေ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​မှာ Download ​လုပ်​ဖို့ ​ပေး​ထား​တဲ့ link ​တွေ​ကို tinpyaste ​ရဲ့ page ​ထဲ​မှာ ​ထည့်​ထား​ပါ​တယ် . ​ဘာ​ကြောင့်​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို Google ​က​နေ ​ရှာ​ရင် ​မ​တွေ့​အောင်​လို့​ပါ . ​ပြီး​တော့ Download ​လုပ်​ရ​မယ့်​လင့်​တွေ ​များ​နေ​ရင် Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ​ဆို​ပြီး ​အ​ပိုင်း​တွေ​မ​ခွဲ​တော့​ဘဲ ​အဲ့​ဒီ့ tinypaste ​ထဲ​မှာ​ပဲ ​အား​လုံး ​ပေါင်း​ပြီး​တော့ ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​အ​ခု ​ကျွန်​တော် ​အောက်​က​ဖိုင်​လေး​ကို Download ​လုပ်​ပြ​ပါ့​မယ် .
​အ​ပေါ်​က Download ifile.it ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ http://tinypaste.com/468ae ​ဆို​တဲ့ tinypaste ​ရဲ့ ​စာ​မျက်​နှာ ​တစ်​ခု​ကို ​ရောက်​သွား​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့ ​တစ်​ကယ် Download ​လုပ်​ရ​မယ့် ifile.it ​ရဲ့ link ​ကို ​အဲ့​ဒီ့ ​ပေါ်​လာ​တဲ့ tinypaste ​ရဲ့ ​စာ​မျက်​နှာ​မှာ ​သေ​ချာ ​ပြန်​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​တွေ့​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​အဲ့​ဒီ့ ifile.it ၊ rapishare ၊ mediafire ၊ Megaupload ၊ multiupload ​စ​တာ​တွေ​ရဲ့ Download link ​တွေ​အား​လုံး​ကို ​အဲ့​ဒီံ tinypaste ​မှာ​ပဲ ​ထည့်​ထား​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . ​ဘယ်​လို Download ​ဆက်​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​ဒီ​မှာ ​ရေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ .
ko June 4, 2010 at 10:29 AM
I would like to getaguitar pro6software please.
242195555 June 5, 2010 at 12:40 PM
​ကျွန်​တော်​လဲ hip hop music maker software ​ကောင်း​ကောင်း​တ​ခု​လောက် ​လို​ချင်​လို့​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ....